Mankalaza ny Faha-roanjato Taonany i Orogoay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2011 11:46 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, 日本語, English
Nanambara i Orogoay fa ny taona 2011 no hankalazàny ny faha-roanjato taonan'ny “dingana ho amin'ny fahaleovantenany” izay nanomboka tamin'ny taona 1811, na dia tamin'ny 25 Aogositra 1825 aza vao nambara ny fahaleovantena. Nampita vaovao tamin'ny alalan'ny vohikala ofisialy sy kaonty Twitter, Facebook, ary Flickr, ireo mpikarakara, momba ireo hetsika maro nomanina hotanterahina mandritra ny taona.
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana Febroary ny fankalazana ny faha-roanjato taona, fa tamin'ny Alatsinainy 10 Oktobra ry zareo Orogoaiana dia nankalaza ny fanendrena an'i José Artigas — mahery fon'i Orogoay— ho “Lehiben'ireo Orientales“, miaraka amin'ny fankalazana makotrokotroka iarahan'ireo fampisehoana asa kanto maro amin'ny sehatra efatra samihafa tany an-tanànan'i Montevideo. Araka ny El Observador [es], maherin'ny 300.000 ny isan'ny olona nanatrika.
"quatuor"-na gitara Rica Cosa nilalao tamin'ny 27 Febroary 2011. Sarin'i Pablo Castro (CC BY-NC 2.0)
Nampiasain'ireo Orogoaiana rehetra ny tenifototra #bi100uy hanehoana fiderana [es] sy tsikera[es] momba ireo fampisehoana, ny fikarakarana ny hetsika na ireo olana nitranga nandritra ny tontolo andro. Andanin'izany koa ireo mpitoraka blaogy dia naneho hevitra momba ny endrika samihafa ananan'ny hetsika, sy momba ny fankalazana ny faha-roanjato taona amin'ny ankapobeny.
Mauricio Milano avy amin'ny Montevideo Blogger [es] dia namboraka fa nanantena ny hientanentana kokoa izy amin'ity faha-roanjato taona ity, ary nanampy hoe:
Tsoriko fa tsy mihevitra mihitsy aho hoe ny ezaka goavana, tsy ara-toekarena ihany fa ny olona koa, izay tanterahana ho an'ny Faha-roanjato taona (tsy maintsy miaiky ianao, tsy ho tanteraka izany raha tsy eo ny talentan'ny maro) dia hitondra any amin'ny fitiavan-tanindrazana bebe kokoa na “fandinihana ara-tantara” lalindalina kokoa. Farafaharatsiny amiko, ny baolina matin'i [mpilalao baolina kitra] Forlán no mahatonga ahy mahatsapa tena ho Orogoaiana kokoa noho ny matso izay karakaraina hatao anio alina, ary tsy hiova amin'ny alalan'ny fanatrehana fampisehoana mihitsy ny fieritreretako ny tantaran'ny fireneko.
Chrisitan Libonatti [es] dia namorona laha-tsary ahitàna ny pejy voalohany amin'ireo gazety Orogoaiana malaza, nivoaka tamin'ny 11 Oktobra. Nanamarika izy fa ahitàna toerana kely momba ny fankalazàna natao tamin'ny Alatsinainy avokoa izy rehetra ireny, fa roa ihany no nanokana ny pejy voalohany iray manontolo ho an'ireo hetsiky ny andro talohan'izay.
Fandinihana fotsiny ity hanehoana fa gazety roa ihany no nanao lohateny lehibe ho an'izany na dia teo aza ireo Orogoaiana an'arivony nandeha teny an-dàlana. Mbola zava-dehibe kokoa noho ny matso nasionaly ny adin'ny sendika, tsy fahampian'ny fandriampahalemana na zavatra hafa.
Tsy midera aho na mitsikera, fa mahafinaritra fotsiny ny mijery azy.
Farany, raha raisina hoe miara-mankalaza i Orogoay sy ny firenena hafa any amin'iny faritra iny mandritra ireo fankalazan ny Faha-roanjato taona, ny mpitoraka blaogy Anna Donner Rybak [es] dia miverina any amin'ireo olona teratany nipetraka tany amin'ny kontinanta talohan'ny nahatongavan'ireo Eoropeana mpanjanatany. Asongadiny fa ny ankamaroan'ny Orogoaiana dia taranaka Eraopeana daholo, nefa manontany izy:
Iza “marina” ny Orogoaiana? Manontany tena aho. Ary valiako izany fa ireo akaiky indrindra amin'izany no taranaky ny teratany teto amintsika
[…] Manontany tena aho hoe, nahoana isika no manome voninahitra ireo izay tonga hamotika ireo tena Arzatina, Orogoaiana , Peroviana, Boliviana?